Wasiirka garsoorka oo maanta hortagaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wasiirka garsoorka oo maanta hortagaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya
Wasiirka garsoorka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa la filayaa inuu maanta hortago baarlamaanka federaalka Soomaaliya, si uu uga jawaabo eedeymo loo haysto.
Illaa 60 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan mooshin ka keenay wasiirka garsoorka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji, kaas oo ku saabsan dhismaha golaha adeegga garsoorka oo ay xildhibaanada doonayaan in dib loogu noqdo.
Xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay maanta su’aalo badan weydiiyaan wasiirka garsoorka, waxaana su’aalahaasi ka mid ah xeerka 28 lr ee dhismaha adeegga garsoorka faraya.
Dhinaca kale, illaa 10 xildhibaan ayaa sidoo kale mooshin ka gudbiyay wasiirka dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jibriil, kaas oo ay ku dalbanayaan inuu wasiirka hortago baarlamaanka maalinta Axadda ah oo ku beegan maalinta berrito.
Wasiir Xoosh ayaa loo heystaa cambaareyn uu dhawaan u jeediyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kaas oo ku saabsanaa qaraarkii ay ku diideen go’aankii maxkamadda sare ee sharcinimmada 8 kursi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in kullanka baarlamaanka uu furmo, waxaana kullankaan uu sidoo kale noqon doonnaa mid soo shaac bixiya xiriirka muddooyinkii dambe sii xumaanayay ee u dhaxeeya baarlamaanka Soomaaliya iyo xukuumadda uu hoggaaminaayo Xasan Cali Kheyre.